Isingeniso nokusetshenziswa komshini we-roller pass shot blasting Machine Shot blasting Machine kuyindlela yobuchwepheshe bokwelashwa ukuqhuma kwesihlabathi sensimbi kanye nokudutshulwa kwensimbi ebusweni bezinto ezibonakalayo ngesivinini esikhulu ngomshini wokuqhumisa ngokudubula. Uma kuqhathaniswa nobunye ubuchwepheshe bokwelashwa komhlaba, ngokushesha ...
Kungani Khetha Sethu umphini wakho wokuqhumisa umshini?
Mayelana neNkampani yakwaDingtai: Imishini yethu yokuqhumisa ngokudubula isusa ngempumelelo ukungcola, indawo ehlanzekile ne-ascale, engeza ukuthungwa ukuze kuthuthukiswe ukunamathela kopende futhi yenyuse nempilo yokuhlangana kwezicelo zensimbi. Xhumana nathi, singasiza: Sinciphise Isikhathi Sokukhiqiza Sokukhiqiza Isikhathi Esiphezulu Sokukhiqiza Lo ...
I-Dubai Ivula kabusha Abavakashi
IDubai Reopens Yabavakashi I-Dubai imemezele kuleli sonto ukuthi ivulele kabusha ezokuvakasha. Kodwa-ke akukacaci ukuthi zingaki izivakashi zakwamanye amazwe ezizobuyela njengoba amazwe amaningi esalwela ukumisa ukusabalala kwe-coronavirus. I-state-state in the United Arab Emirates incike kakhulu kubavakashi ukuchitha ukwenza ...
Namuhla, uWuhan uyaqala kabusha
Namuhla, uWuhan uvunyelwe ngokusemthethweni ukuvulwa, ngemuva kwezinsuku ezingama-76 zikhiyiwe. Usuku lokuvalwa ngokusemthethweni kweWuhan luyi-10 ekuseni ngoJanuwari 23, 2020. Kuqubuke isimo ngokuzumayo. Kodwa ngenhlanhla, kukhona ama-retrograde angenasibindi angenakubalwa, ngemizamo yabo engenasibindi futhi engenabugovu ...
Izindaba ezimnandi! Bathandekayo, lawa mazwe ayisishiyagalombili eYurophu alungiselela ukuqeda ukuvala umlomo
Kusukela amazwe ase-Europe aqala ukumemezela ukuvalwa kwezwe, lapho kungavulwa, aqala kabusha ukukhiqiza, lapho imakethe izokwazi ukusebenza kahle sekuyinto yokukhathalela abantu abaningi. Ikakhulu abantu bethu bokuhweba bakwamanye amazwe bakhathazeka ngale nkinga. Njengakamuva ...
Yiziphi izinhlobo zemishini yokuqhumisa izibhamu ezilungele abasebenzisi? Kuya ngosayizi wokusebenza nokukhishwayo.
Kunokulungiswa okuningi okuhlukile komshini wokuqhuma kokudubula. Ukuhlukaniswa kwesakhiwo kuhlukaniswe ngokuya ngokuthwala, futhi isakhiwo ngasinye sinomsebenzi waso owhlukile. Umz: Ukujikijela okuncane okuphakathi nendawo okuphakathi kulungele uhlobo lwesigubhu noma uhlobo lweringi; The f ...
H umshini wokudubula uqhuma, Umshini wokuqhuma kwe-Shot, Shot Blasting Wheel, Shot Blasting Turbine, ukudubula ukuqhuma kwezingxenye ze-Spare, wadubula Umshini Wokupholisa, Yonke Imikhiqizo